कांग्रेस नेतृत्वमा जनताले खोजेको दुई अनुहार : यस्तो छ गगन र विश्वको विगत « Lokpath
कांग्रेस नेतृत्वमा जनताले खोजेको दुई अनुहार : यस्तो छ गगन र विश्वको विगत
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापा विजयी भएका छन् । यससँगै विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका दुई अनुहार कांग्रेसको नेतृत्वमा आएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो सार्वजनिक नतिजाअनुसार थापाले ३ हजार २३ मत ल्याएका छन् भने शर्माले १ हजार ९ सय ८४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।
कांग्रेसमा महामन्त्री सभापतिपछिको शक्तिशाली पद हो । संगठन निर्माण र पार्टीलाई चलायमान बनाउनेसहितका दायित्व महामन्त्रीमा हुन्छ ।
पार्टीभित्र हराउँदै गएको नीति दुई युवाको हातमा नेतृत्व आएपछि सुधार हुने धेरैको विश्वास रहेको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा छलाङ मारेका यी दुई युवानेताहरु कांग्रेसमा मात्र नभइ कांग्रेसबाहिर पनि त्यतिकै ‘पपुलर’ मानिन्छन् ।
यी दुवै वाककलामा पोख्त छन् । पार्टी सरकारमा हुँदा होस् वा सरकारबाहिर हुँदा दुवै युवाको आवाज उत्तिकै बुलन्द पाउन सकिन्छ । साथै कांग्रेसी र आम मानिसले अपेक्षा गरेको कारण दुवै नेताहरुको आगामी दिन चुनौतीपूर्ण पक्कै छ ।
काे हुन् गगन थापा ?
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रखर वक्ताको रुपमा चिनिएका गगन थापाको जन्म २०३३ सालमा काठमाडौंको प्रसूति गृहमा भएको हो । माता रामेश्वरी थापा र पिता महेन्द्र कुमार थापाका माइला छोरा गगनका हजुरबुवा सोलुखुम्बु जिल्लाको खाल्पा गाउँका धनी मुखिया भीमराज थापा हुन् ।
उनका पिता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा इन्जिनियर भएकाले गगनको बाल्यकालका केही समय सिन्धुपाल्चोकमा बित्यो । गगनका एक दाजु र दुई भाइ छन् ।
सिद्धार्थ वनस्थली हाइस्कुलमा पढेका गगको इच्छा डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने थियो । परिवार र विद्यालयमा पनि त्यही सिकाइन्थ्यो । कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा उनी सक्रिय भएर लागे । तर, त्यतिबेलासम्म पनि राजनीतिमा लाग्ने उनको सोचाइ थिएन ।
त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्न थालेपछि नेविसंघको सदस्य भएर गगनले विद्यार्थी राजनीति सुरु गरे । २०५१ मा उनी त्रिचन्द्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित भए ।
त्यसपछि मात्र उनले आफ्नो डाक्टर बन्ने सपनालाई मोडेर राजनीतिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाए । पछि त्रिचन्द्र स्ववियुमा सदस्यसचिव हुँदै २०५५ मा उनी सभापति बने ।
स्ववियु सभापति भएपछि नेविसंघको केन्द्रीय राजनीतिमा उनको संलग्नता बढ्यो । प्रखर वाककला र दृढ लगनशीलताका कारण नेविसंघमा उनको लोकप्रियता बढ्दै गयो । उनी उपाध्यक्ष हुँदै २०५९ मा नेविसंघको महामन्त्री समेत बने ।
जीवनमा पहिलो पटक २०५१ मा उनी हिरासत बस्नुपर्‍यो । त्यतिबेला एमालेको अल्पमतको सरकार थियो । गृहमन्त्री केपी ओली थिए । नेविसंघले नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि पनि उनी ८–१० पटक जेल परे ।
२०५९ असोज १८ पछि सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा उनीसहित गुरुराज घिमिरे र पुरुषोत्तम पौडेललाई राजकाज मुद्दा लाग्यो । त्यसपछि उनको अधिकांश समय सडक आन्दोलनमा बित्यो ।
माघ १९ पछि पनि गगनलाई राजद्रोहको मुद्दाले छाडेन । उनी पक्राउ पर्दै छुट्ने क्रम भइरह्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनको प्रखर वाककला अनि लोकप्रिय छविको जताततै प्रशंसा भायो । बिस्तारै उनी लोकतन्त्रकै नायक बन्न सफल भए ।
नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदको लागि आफ्नो उम्मेदारी घोषणा गरेका थापालाई नेपाली कांग्रेसको भावी सभापतिको रूपमा समेत हेरिन्छ ।
उनी प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्, २०७३ मा स्वास्थ मन्त्री बनेका थिए ।
दोस्रो सविधानसभामा कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिको प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेपछि नेपाली कांग्रेसका युवानेता गगन थापा एक सभासदको रूपमा सधैँ चर्चाको शिखरमा रहे ।
समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका उनले २०५९ देखि २०६१ सम्म नेविसंघको महामन्त्री भएर काम गरेका थिए ।
राजाको सक्रिय शासनका बेला समेत कांग्रेसमा गणतन्त्रको आवाज प्रखर रूपमा उठाउने युवा हुन् ।
संविधानसभामा ‘नेपाली कांग्रेस’ नामक पुस्तकका लेखक थापाले नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीकी छोरी डा. अञ्जना केसीसँग २०६५ वैशाखमा विवाह गरे ।
दिनदिनै लोकप्रियताको शिखर चड्दै जाने क्रममा ६४ को चुनावमा सभासद बनेका थापा कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी ७०५ भोट प्राप्त गरी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए ।
यसबाहेक दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ बाट विपक्षी उम्मेदवारहरू नेकपा एमालेका निर्मल कुइँकेल तथा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका नेता तथा हालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (पासाङ)लाई भारी मतले हराएका थिए ।
१३औँ महाधिवेशनमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट वीपीपुत्र शशांक र आफ्नै ससुरा अर्जुननरसिं केसीसँग महामन्त्रीमा उठेका उनले बदरसहित झन्डै ७०० मत ल्याएर आफ्नो लोकप्रियता सबैका सामु छर्लंग गरिदिएका थिए ।
लोकमानसिह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली जनतामाझ यिनी अझै लोकप्रिय भएका हुन् । चुनौती लिन नडराउने र सफल पनि हुँदै आएका उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै आएका एक्ला कांग्रेसी हुन् ।
यसरी लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व र छविका कारण सबैको नजरमा परेका थापा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवशनमा कांग्रेसको दोस्रो ठूलो शक्तिशाली पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
को हुन् विश्वप्रकाश ?
विश्व प्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय छवि बोकेका उदाउँदो र प्रभावशाली युवा नेता हुन् । २०२७ पुस ६ गते झापाको शान्तिनगरमा जन्मिएका शर्मा २०३७ सालमा झापामा विद्यालय पढ्दादेखि नै राजनीतिमा लागेका नेता हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशासत्रमा स्नातकोत्तर गरेका शर्मा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।
तत्कालीन नेविसंघ क्याम्पस कमिटीका सभापति समेत रहेका विश्वप्रकाश शर्मा विसं २०४५ सालको स्ववियु निर्वाचनमा पराजित भए । तर, उनले मेची क्याम्पसका हजारौँ विद्यार्थीको मनमा बसिसकेका थिए ।
उनले अर्को निर्वाचनमा नेविसंघलाई जित्ने स्थितिमा पुर्‍याइदिए । त्यो जितसँगै पहिलो पटक मेची क्याम्पसमा नेविसंघले स्ववियुमा जितको जग बसाल्यो ।
सन् २०१४ मा उनी पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी पार्टीका अध्यक्ष र नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नजिकको युवा नेताका रुपमा परिचित शर्माको कार्यकुशलताका कारण उनलाई १३औँ महाधिवेशनपछि पार्टीका प्रवक्ता चुनियो ।
शर्मा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो निर्वाचनमा झापा १ मा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए । निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि प्रतिद्वन्द्वीलाई मित्रतापूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै शर्माको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो ।
राजनीतिमा प्रखर वक्ताका रुपमा परिचित शर्मा राजनीतिसँगै गीत तथा साहित्य लेखन, समाजसेवा, परोपकारी काम, कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा पनि उत्तिकै चर्चित छन् ।
हरेक कुरामा स्पष्ट आफ्नो धारणा राख्ने विश्वप्रकाश निडर र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । उनी पार्टीभित्र भएका गलत निर्णय र गलत कदमलाई खुलेरै विरोध गर्छन् ।
यही शैलीका कारण उनी पार्टीभित्र मात्र नभएर बाहिर अन्य पार्टीका युवाहरुमाझ पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् । संविधान निर्माणपछि बनेको सरकारका लागि सुशील कोइरालाले उम्मेदवारी दिएपछि विश्वप्रकाशले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएका थिए ।
त्यतिबेला उनले भनेको थिए, ‘अब संविधान लेख्न महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालो हो, उहाँ (सुशील कोइराला)ले उम्मेदवार दिने होइन, बाटो खुला गर्नुपर्छ ।’
यसैगरी उनले चितवनको भरतपुरमा भएको निर्वाचनमा पुनः मतदानको विरोध गर्दै मतगणना अगाडि बढाउन समेत उनले माग गरेका थिए ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुक अस्तव्यस्त भएको समयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेन । तर, विश्वप्रकाशले नाकाबन्दीको सशक्त ढंगले विरोध गरे । यस कुराले पनि उनी धेरै नेपालीको मनमा बस्न सफल भए ।
त्यस्तै, मधेशमा चलेको आन्दोलनका दौरान विश्वप्रकाश ९ सदस्यीय टोली लिएर मधेशका आठवटै जिल्लामा पुगे । जिल्लास्तरीय भेला गराए । वीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठका शालिक भत्काइएका ठाउँहरुमा शालिक बनाउन लगाए । र, जलाइएका पार्टी कार्यालयहरुको पुनर्निर्माणमा जुट्न आग्रह गरे ।
नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएका शर्मा अरु राजनीतिक नेता कार्यकर्ताभन्दा फरक छन् ।
नेपाली राजनीतिक आन्दोेलनमा लामो समय खर्चिएकाहरु पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल बसेका दृष्टान्तहरु हाम्रो वरपर प्रशस्त छन् । काठमाडौंमा डेरामा बसेर विद्यार्थी राजनीति गर्ने नेतालाई आयस्रोत के हो भनेर सोध्दा उत्तर दिन अकमकाउँछन् ।
तर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा त्यस किसिमका प्रवृतिप्रति सचेत छन् ।
उनी राजनीतिक दलका हरेक नेता–कार्यकर्तालाई उद्यमशील बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा लिएर हिँडेका नेता हुन् ।
‘तीन दिन पार्टीका लागि, चार दिन रोटीका लागि’ भन्ने अवधारणामा हिँडेका शर्मा पछि राजनीतिबाट बिदा लिँँदै गर्दा कसैका अघि पनि शिर झुकाएर भाग्न नपरोस् भन्ने ठान्छन् ।
बारम्बार सत्तामा पुग्दा पनि नसुध्रिएका भनेर आरोप खेपिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र सिंगो नेपाली कांग्रेसलाई यी दुइ हस्तीले कत्तिको सुधार्नेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,पुष,१,बिहीवार १६:१०